Hector Bellerin oo la dhacsan xiisaha uga imaanaya kooxda Barcelona – Gool FM
Liibaan Fantastic March 21, 2017
(Barcelona) 21 Maarso 2017 Daafaca kooxda Arsenal ee Hector Bellerin ayaa soo dhaweeyay xiisaha uga imaanaya kooxdiisii hore ee Barcelona.
Laacibka reer Spain ayaa sheegay in aan la saadaalin karin wixii dhici doona mustaqbalka balse niyadiisu ay ahayd inuu ingiriiska ka sameeyo magac cusub markii uu katagayay Barcelona.
Wuxuuna intaa sii raaciyay in xiisaha Barcelona uu soo jiidanayo laacib walba maadama ay tahay kooxda ugu fiican aduunka.
“Xiisaha Barcelona waa mid soo jiidanaya laacib walba, waa kooxda ugu fiican aduunka” ayuu yiri Hector Bellerin oo la hadlay Mundo Deportivo.
“Xaqiiqdii waxaan ku soo barbaaray da’yarta kooxda, taas waa mid aan ka helayo fursad badan oo aan kula qabsan karo, laakiin haatan waxaan xooga saarayaa inta ka harsan xiliciyaareed kan, wax walbana gadaal ayeey ka imaan doonaan”.
“Markii aan katagayay Barcelona ma doonayn inaan dib ugu soo laabto, niyadaydu waxay ahayd inaan magac ka sameeyo ingiriiska, laakiin tani waa kubadda cagta, mana garan kartid waxa uu kuu qarinayo mustaqbalka”.
Hector Bellerin oo la waydiiyay xiisaha uga imaanaya Manchester City ayaa yiri:
“Sidoo kale xiisahaas waa mid cajiib ah, wax walba waxay u muuqdaan wax u socda sidii larabay”.
Milan Channel oo sheegay xilliga la bixin doono dibaajiga 3-aad ee iibka Milan